Vakio-raha tsy misy taratasy, ary tsy misy vola, mpampianatra teny anglisy-Info DW - NY LAHATSARY AMIN'NY CHAT. Mampiaraka an-tserasera!
Ny fikarohana ireo E-Boky dia tsy mora foana fa mahafa-po
Eo amin'ny fikarohana ho an'ny iray mety mahazatra ny fampianarana ny alemana, ny vanin-taona mafana ny famakiana, na mba Hamelombelona ny fahalalana ny teny alemana very amin'ny Aterineto
Ireto misy vitsivitsy haingana ny fomba ny fomba sy ny toerana maimaim-poana, miteny malagasy E-Boky dia afaka miditra.
Raha tianao ny mamaky E-Boky amin'ny Mpamaky iray na ny Takelaka, ny ankamaroan ' ny fotoana dia mitaky ny endrika PDF na EPUB.
EPUB mijoro ho elektronika famoahana boky sy misokatra ny Faneva ho E-Boky, ny ampifanarahana - tany kosa ny PDF-Format ny lamba fanakonana ny habeny ny mpamaky.
Indreto ny voafantina lisitra ny tranonkala, ny ankamaroany nandrakotra na endrika, fa koa ny an'ny hafa, toy ny MOBI, ary TXT: ny Kindle maimaim-poana Fampiharana afaka hamaky ny rehetra ny Kindle endrika hita ihany koa ao amin'ny Android sy ny iOS fitaovana, Takela-bato sy ny solosaina. Toy ny Kindle mpampiasa, dia afaka mampakatra ny Amazon isan'andro, ny sasany E-Boky maimaim-poana, na dia tsy misy ny famandrihana. Eto dia afaka miditra maimaim-poana ny E-Boky sy ny sakafo eo amin'ny ilany havia ny valin'ny fikarohana akaiky kokoa ny fetra. Amin'ny tsindrio ny sokajy tsirairay dia azo aseho amin'ny an-Tampon'ny ny amin'izao fotoana izao ny tolotra. Free classics ' izao tontolo izao ny boky sy gazety amin'ny teny anglisy ianao dia hahita eto. Mahaliana fa ny fampiasana ao an-dakilasy ihany koa dia afaka E-Boky avy amin'ny nofinofy, ary Mianatra ny mitraka. Koa amin'ny teny anglisy pejy Amazon free, malagasy miteny E-Boky dia misy, ohatra, ao amin'ny canadian side, ny namany sary avy amin'ny Fanjakana Mitambatra ary ny Amerikana, lafiny. Ny fifanarahana miovaova isan'andro, ary dia havaozina mandrakariva. "Maimaim-poana ny E-Boky Kindle" afaka ny ho any momba ity Olana ity.
Ny maimaim-poana Fampiharana ny sivana ny isan'andro efaha amin'ny isam-ny fangatahana, ny sokajy sy ny fiteny.
Maro Goethe institiota manerana izao tontolo izao, efa nisy ihany ny trano famakiam-boky. Tsy azo maimaim-poana dia tsy vitan'ny hoe mindrana boky, fa koa ny E-Boky ao amin'ny antsoina hoe on-mampisambotra. Momba ny Goethe-Institut ao amin'ny firenena, dia afaka mahazo maimaim-poana ny fidirana amin'ny teny alemana literatiora sy mamaky azy ireny amin'ny fotoana rehetra. Maimaim-poana ny E-Boky dia azo jerena ao amin'ny maro ny tanàna ny trano famakiam-boky sy ny Oniversite ny trano famakiam-boky, mazava ho azy, hatrany ambany ny fepetra takiana ny ID ny manan-kery Mba manana ny Andrim-panjakana.
Raha ny fifantenana mifanaraka afa-tsy ampahany kely tamin ' ny maimaim-poana ny E-Boky ao amin'ny internet.
Rehetra E-Boky no nanangona ny manan-danja indrindra ara-dalàna ny loharanom-baovao miaraka ary manolotra azy amin'ny Endrika mety fitadiavana asa misy. Tsy azo manokana nitady, na ny fampahafantarana dia ilaina, ny fiteny izay ny E-Boky misy, ary ny zavatra rakitra endrika.
Mampiaraka Toerana avy Dallas: ny Mampiaraka toerana Izay
amin'ny chat roulette fisoratana anarana ankizivavy tranonkala ny lahatsary Mampiaraka amin'ny zazavavy ny lahatsary amin'ny chat manaitaitra fantaro ny tanàna lahatsary fampidirana adult Dating lahatsary ny ankizivavy lahatsary fampidirana ny fifandraisana Fiarahana tsy misy fisoratana anarana ankizivavy Mampiaraka sary mampiaraka